चितवन क्षेत्र नं. ३ मा प्रचण्ड काँग्रेस फकाउँदै, पाण्डे एमाले « Naya Page
चितवन क्षेत्र नं. ३ मा प्रचण्ड काँग्रेस फकाउँदै, पाण्डे एमाले
काठमाडौं: चितवन क्षेत्र नं ३ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे एक अर्काको गठबन्धनको मत तान्न लागि परेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल काँग्रेसका मत फकाउँदै छन् । भने, पाण्डे एमाले फकाउँदै छन् । काँग्रेस र एमालेबाट सो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार छैनन् । आफ्नो गठबन्धन बाहिरको मत तान्न सकेमा जित सुनिश्चित हुने भन्दै उनीहरु एक अर्काको गठबन्धनबाट मत तान्न लागि परेका हुन् ।
काँग्रेस निकट बुद्धिजीवी प्रा. डा. सूर्यकान्त घिमिरे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी पुत्री रेनुलाई भरतपुर महानगरमा प्रमुख बनाउँदा काँग्रेसको सहयोग रहेकाले पुनः सहयोग मिल्न सक्ने अपेक्षा दाहालको रहेको बताएका छन् । तर काँग्रेस झन बढी चिढिएकाले दाहालको त्यो अपेक्षा पूरा हुने घिमिरे सम्भावना कमै देख्छन् ।
काँग्रेसले चुनावमा राप्रपाका उम्मेदवार पाण्डेलाई चुनाव चिह्न रुख लिन आग्रह गरेका थिए । पाण्डेले एमालेको मत पनि आफूले पाउने भएकाले त्यो अस्वीकार गरेका कारण स्थानीय निर्वाचनमा रुष्ट बनेका एमालेका केही मत पाण्डेले पाउन सक्ने घिमिरे बताउँछन् ।
वाम बुद्धिजीवी रमाकान्त सापकोटा दाहालले काँग्रेसबाट पाउने मत र पाण्डेले एमालेबाट पाउने मत बराबर नै हुने अनुमान गर्छन् । परिणाम भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि गठबन्धनको मत यताउता जाने संख्या बराबरी नै हुने उन भने ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिढिएको एमालेले निर्वाचन पेचिलो हुने हुँदा निर्वाचनको दिनसम्ममा प्रचण्डलाई मतदान गर्ने उनले बताए । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पराजित बनेएका एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली अहिले दाहालको चुनावी प्रचारमै रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी सभाहरुमा काँग्रेसलाई फकाउनमै समय बिताउने गरेको छन् । अधिकांश उनको भाषणमा बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफू लागिपरेको बताउँदै आएका छन् ।
शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता आफू भएको भन्दै उनले अर्को हस्ताक्षरकर्ता कोइरालाको सपना आफैँले मात्रै साकार गर्न सक्ने भन्दै भोट माग्दै आएका छन् । काँग्रेसप्रति उनको गुनासो छ, ‘कि त आफ्नै उम्मेदवार हुनुपथ्र्यो, होइन भने गणतन्त्रविरोधी राप्रपालाई समर्थन गर्न हुँदैनथ्यो ।’
यता पाण्डे पनि एमाले फकाउनमा आफ्नो समय खर्चिंदै आएका छन् । हिजो छोरी जिताउने काँग्रेसलाई छाडेर एमालेको साथ लिन आएका दाहालले एमालेलाई पनि छाड्ने हुँदा सजग हुन एमालेलाई पाण्डेले अपिल गर्दै आएको छ । निर्वाचनपछि प्रचण्डले एमालेलाई छोड्ने पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।
प्रचण्डका मुख्य प्रतिस्पर्धी पाण्डे राप्रपा ‘प्रजातान्त्रिक’का केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री हुन् । तत्कालीन क्षेत्र नं ४ र ५ मिलाएर बनाएको हालको क्षेत्र नं ३ मा पाण्डे पुनः काँग्रेसको समर्थनमा निर्वाचन लड्दै छन् ।
विसं २०७० मा तत्कालीन क्षेत्र नं ४ मा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले दोब्बर मत ल्याएर विजयी भएको थियो । काँग्रेसको सुरक्षित स्थान खोज्दै कोइराला त्यो समयमा चितवन आएको हो । तत्कालीन क्षेत्र नं ५ बाट पाण्डे विजयी भएको थियो। विसं २०७० को निर्वाचनमा काँग्रेस र राप्रपाले एक/एक सिट जितेको थियो ।